Ithegi: inkampani ekhawulezayo | Martech Zone
I-Sweetspot: Iselfowuni yokuQala, iDashboard eDijithali yokuSebenza ngokuSebenza
NgeCawa, Meyi 17, 2015 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Amathuba okuba ukhe wadibana nenye okanye elinye iqonga ledashboard kwidesktop kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Oku kuyahluka kwiiplagi kunye nokudlala iiphakheji ezidibanisa inani eliqingqiweyo losasazo lwentlalo kunye neemetwork ze-analytics zewebhu, kwishishini elipheleleyo lendalo elibandakanya uluhlu olubanzi lwemithombo yedatha kunye neempawu zolawulo. I-Sweetspot ineenjongo zokuthatha udidi lokugqibela alubeke kwinqanaba elitsha, ngenjongo yokwenza kube lula kunangaphambili ukuba "abathengi beenkcukacha zedatha" benze kwiimpawu zabo. Inkqubo ye-
Ukuba uyifundile le bhlog ixesha elithile, uyazi ukuba ndiyayidelela imigaqo. Imidiya yokuncokola isencinci kakhulu ke ukusebenzisa imigaqo okwangoku kubonakala kungaphambi kwexesha. Abantu abakwi-FastCompany badibanisa ingqokelela yeengcebiso zezibizwa ngokuba yiMithetho yeendaba zeNtlalo. Le infographic yingqokelela yemithetho epapashwe kuhlelo lukaSeptemba lweli phephancwadi. Andizukubiza le mithetho njengam